कानुन तोड्ने अहङ्कारीहरु | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ कार्तिक ६, बिहीबार ०९:०९ गते
हुन त तोडफोड, गुन्डागर्दी, कमजोरलाई ङ्याँक्नेजस्ता काम गर्नेहरुको परिचय नै अहङ्कारी हो । अहङ्कारीहरुले नै त्यस्ता विध्वंसकारी काम गर्छन् । अहङ्कारीहरुले आफूलाई बहादुर पनि ठान्छन् । उपद्रो गर्छन् । उपद्रो गरेबापत सजायबाट अनेक चालबालीद्वारा जोगिन्छन् र जोगिएकै कारण हौसिन्छन् र उपद्रोलाई निरन्तरता दिन्छन् ।
नेपालमा कानुन तोड्नेहरुको संख्या हिजोआज बाक्लै छ भन्ने कुरा थाहा पाउनेहरु नेपालमा जन्मिएर नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका शुद्ध नेपाली नागरिकहरु छन् । महालोभी र महाआर्थिक भ्रष्टाचारीहरुलाई हजार र पाँच सयको बन्डल घूस दिएर नागरिकता प्रमाणपत्र किनेर नेपाली बनेका छिमेकी देशका अर्धनेपालीहरु, घूस दिएर नेपाली बन्ने चाहना बोकेर लाइनमा उभिएका गहुँगोराहरु, छिमेकी देशका सरकारहरु र समुद्रपारिका राष्ट्रहरु सबैलाई भलीभाँती थाहा छ कि नेपालमा कानुन तोडिन्छ र मर्काइन्छ । कानुन तोड्दा वा मर्काउँदा यो खालको कुकर्म गर्नेहरुलाई सजाय होइन, उस्तैपरे तक्मा नै दिने चलन आज होइन श्री ५ हरुले हाँकेका पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै चालू थियो र अहिले पनि बेस्सरी कोसिस गर्दागर्दै पनि त्यो चलन हट्न सकेको छैन । सायद एक–दुई जनाले सक्ने कुरा नभएर पनि हुन सक्छ । आजसम्म त्यो पुरानो चलन जस्ताको तस्तै छ । अलिकति पनि यताउता भएको छैन ।
अब कानुन तोड्नेहरुको लर्कोबारे चर्चा सुरू गरौँ । सबैभन्दा पहिला बहालवाला र भूतपूर्वहरुले यो देशमा कानुन तोडेका छन् । एकबारको जुनीमा जसरीतसरी मन्त्री भयो । मन्त्रीज्यूहरुले गाडी र गाडीमा चाहिने चीजबीजदेखि लिएर ड्राइभरसमेत सुविधामा पाउनुहुन्छ । जब मन्त्रीपदबाट हट्नुहुन्छ तब मन्त्रीज्यू गाडी र ड्राइभर त फिर्ता गर्नुहुन्न नै, डिजेल र पेट्रोलसमेत राज्यबाट मिलाइमिलाइ फुत्काउनुहुन्छ । परार सालसम्म यस्तो गाँजेमाँजे काम हुन्थ्यो, पछिल्ला दिनहरुमा ओली सरकारले त्यो खालको सुविधा खोस्न थालेपछि कम भएको छ तर निमिट्यान्नचाहिँ भएको छैन ।
सुरक्षा निकायमा काम गर्ने उपल्ला हाकिम साहेबहरुले तल्ला दर्जाका कर्मचारीहरुलाई घरमा भाँडा माझ्न लगाउने, आफ्ना बालबालिकाहरुलाई स्कुल पु¥याउन पठाउने, ससुरालीमा घिउचाकु पु¥याउन सिपाही खटाउनेजस्ता काम गरेर नेपालको कानुनलाई ठाडै काचकुच पारेको युगौँयुग बितिसकेको छ । अहँ, कोही बोलेनन् । कानुनलाई प्वाल पारेर पन्चर बनाउनेहरुबारे तलदेखि माथिसम्मका कोही पनि बोलेनन् । तर, एकबाजी परारै एकहुल नेपाली जनता काठमाडौँको टुँडिखेलमा बेजोडले चिच्याए । चिच्याउँदै तिनले सिंहदरबार र बालुवाटारतिर औँला ठड्याएर भने, “खबरदार ! कानुन तोड्ने अहङ्कारीहरुलाई कानुनी कारबाही गर ।” बीस–पचास जनाको सानो एकहुल जनताको आवाज चर्को त थिएन तर माग, भनाइ र तर्क अरुले काट्न नसक्ने खालको भएकैले होला सिंहदरबार र बालुवाटारको कान ठाडो भयो र मातहतका कानुन तोड्नेहरुलाई “अबदेखि तल्लाहरुलाई तल्लो नसोच्नु, मनमा सोचे पनि व्यवहारमा नदेखाउनु” भन्ने उर्दी जारी ग¥यो । उपल्ला कानुन तोड्नेहरु दुई–चार इन्च हच्किए । तर, अनेक समस्याको जालोमा लपेटिएका त्यो सानो एकहुल जनता तितरबितर भए । कता हराए हराए । फेरि खबरदारी गर्ने आवाज हराएसँगै कानुन तोड्नेहरुले आफ्नो पुरानो रुप धारण गरिहाले । तल्लाहरुलाई तल्लै सोचियोमात्रै होइन, व्यवहारमै पनि तल्लो भनियो र फेरि तल्लाहरु बडेहरुको भान्साका लागि तरकारी किन्न झोला बोकेर तरकारी पसलमा पुगे ।
नेपाली नागरिक समाजलाई दुःख दिएर हैरान पार्ने अपराधीहरुको कठालो समात्ने सिपाही तरकारीको झोला समात्न थालेपछि यो देशका जनतालाई सुरक्षा गर्ने सिपाहीको संख्या कम त हुने नै भयो, समाजबाट अपराधकर्म कम हुने सम्भावना पनि टर्दै गयो । जब सुरक्षाकर्मी नै कम हुन्छ तब समाजमा शान्ति सुरक्षा बहाल होलाको कल्पना त गर्नै सकिएन, उल्टै अपराधी त¤वले सुरक्षाकर्मीकै ज्यान लिने अवस्था बन्न पुग्यो । ताजा उदाहरण कैलालीमा हप्तादिनअघिमात्रै गाँजा तस्करहरुले गरेका एक विश्वकर्मा थरका प्रहरी सहायक निरीक्षकको हत्यालाई लिन सकिन्छ । एक सिपाही अहिले पनि बेपत्ता छन् । प्रस्ट छ, जम्मा दुई जनामात्रैको सानो संख्या ठूलो संख्यामा रहेका तस्करहरुसँग जुध्नुपर्दा त्यो खालको घटना घटेको हो । कुनै एक मन्त्रीलाई पन्ध्र जना वा कुनै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा २५ भन्दा ज्यादा सुरक्षाकर्मी खटाउनुको सट्टा तस्करहरुसँग भिड्न सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउनेतर्फ सोचिएको भए कठै बिचरा ती असईको ज्यान जाने थिएन । बडेहरुले कानुन तोडेर वाहियात तरिकाले सुरक्षाकर्मीलाई दुरूपयोग गर्दा यो परिणाम निस्किएको जगजाहेर छ । फेरि पनि कोही बोलेनन् । अहिले एउटा असई केटोको ज्यान गयो । तस्करहरु हतियार लिएर जमजमाएका छन् । फेरि पनि अरु सिपाहीहरुको ज्यान जाने अवस्था छ र पनि कोही बोल्दैन । कसैको दिमागमा आउँदैन । कानुन तोड्नेहरु तोडिरहन्छन्, टोलाउनेहरु टोलाइरहन्छन् र ज्यान जानेहरुको गइरहन्छ । लाज पनि कस्तो नलागेको हो, अचम्म र ताज्जुब लाग्छ ! दुई–तीन वर्षमात्रै भयो चारतारे जर्नेल नीरशमशेर जबराको निधन भयो । झन्डै सय वर्षको उमेरमा निधन हुनुअघिसम्म उनको ज्यानको सुरक्षाका लागि केही सिपाहीहरु खटाइएका थिए । एक सय वर्ष पुरानो ज्यानका लागि कोबाट खतरा छ भन्ने अनुमानका साथ सुरक्षाकर्मीहरु खटाइएको होला ? अहिले पनि आज हो कि भोलि हो भन्ने उमेरका पुरानाहरुको ज्यान सुरक्षाका लागि थुप्रै सिपाहीहरु तैनाथ गरिएको बुझिन्छ । मक्किएका शरीर प्राकृतिकरुपले नै ढल्छन्, सुरक्षाको कुनै गुन्जाइस छैन तर फेरि पनि किन चाहिनेभन्दा ज्यादा संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने जरूरी ? कुनै एउटा ज्यानको सुरक्षातर्फ राज्यले ध्यान दिँदा हजारौँ जनताको ज्यान जोखिममा परेको अवस्था देख्दादेख्दै किन राज्यका जिम्मेवारहरु आँखा चिम्लिएर बसिरहेका होलान् ? प्रश्न गर्दा पनि दिक्क लाग्छ ।
बहालवाला सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले बेजोडले यातायात सुविधाको नाममा जनताको धन उडाएर कानुन तोडेका छन् । करोड होइन, अरब रूपैयाँबराबरको पेट्रोल र डिजेल उडाइएको छ, गाडी मर्मतको नाममा उत्तिकै लुट मच्चिएको छ । नयाँ खरिदमा उही तरिका र अवस्था छ । सुविधामा पाएको गाडीमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सालासाली, भान्जाभान्जी र साथीहरुले मस्ती मारिरहेका छन् । कानुन तोड्न पल्केका अहङ्कारीहरुले यसरी कानुन तोड्दा जनताको धन खरानीको पाराले आकासमा उडिरहेको छ भने सीमान्तकृत जनता यही देशमा आधा नाङ्गो ज्यान लिएर सडक–सडक भौँतारिएका छन् । कसैले देला र खाऊँलाको अवस्थामा छन् । अहङ्कारीहरुले कानुन नतोड्ने र तोड्न हुन्न भन्नेहरुको प्रभाव देखिन थाल्ने हो भने समाजमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था त मजबुत हुन्थ्यो नै, आधापेट खान नपाउनेहरुले भरपेट खान पाउने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । आर्थिक भ्रष्टाचारमा समेत कमी आउँथ्यो । बेलुका–बेलुका भट्टीको अघिल्तिर देखिने सरकारी गाडीले फोकटमा उडाउने गरेको पेट्रोल र डिजेलमात्रै बचाउन सकिए पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनता पूरा श्वास फेरेर बाँच्न पाउँथे । शोषणरहित समाज निर्माणको परिकल्पना पूरा हुन पनि गोरेटो निर्माण हुन्थ्यो । आज सक्नेले कानुन तोड्दा, त्यसको विरूद्धमा बोल्न सक्ने चर्को आवाज भएकाहरुले नबोल्दा र मैले कानुन तोडेको छैन, अरुको मलाई मतलब छैन भन्ने गर्दा नेपाल आज बिस्तारै बिस्तारै कानुन भएको तर नभएबराबरको अवस्थामा रूमल्लिन पुगेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म, कानुन तोड्ने अहङ्कारीहरुको टाउकोमा विवेकको बीउ नछरेसम्म, “सरकारी गाडी १० बजेदेखि पाँच बजेसम्म” र बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग निषेध नगरेसम्म नेपालमा आर्थिक विकास र न्याय भन्ने कुरा बोल्ने शब्द र लेख्ने कुरामै सीमित रहनेछ । विकास भन्ने कुरा सपनाको मीठो फलमात्रै भइरहने छ ।